Ebee ka m ga-amalite webo SEO nkwado site na mmalite?
E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na algọridim maka ịnye ọdịda weebụ n'ịntanetị na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ Google jiri, tinyere ọrụ ndị ọzọ dịka Yahoo na Bing. Maka nnukwu ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ n'onwe ya, ọ na-azụ na algorithm nke ọma nchebe, nke a na-egosighi ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ndị isi ya kpuchiri ya. Ịtụle nnukwu nnyocha, nyocha ndị dị irè na ụfọdụ ihe ọmụma nke ụfọdụ ndị ọrụ na mbụ, ihe niile anyị maarala - Google's algorithm na-achọ ihe dị ka ihe nchọgharị 200, bụ nke ọkachamara nchọgharị na-emekarị, dị ka idebe ihe ihe mgbagha nke crawlers nchọta maka nhazi nhazi.
Nyere na enweghi usoro mmemme ma ọ bụ usoro iji nweta elu nke ogo ọchụchọ Google, enwere usoro zuru ezu na gburugburu maka imezi ibe weebụ.Ugbu a, a maara ya dị ka Search Engine Optimization (SEO). Okwu ahụ pụtara ime ihe niile dị na otu onye echere - na-arịgo n'elu ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ search engine (a. k. a. SERPs). SEO kachasị mara maka ọrụ siri ike na oge na-ewe ya iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ zuru oke - nke bara uru na ihe kariri ike maka onye ọ bụla bi na ya, yana nlegharị nchọgharị na-agba ọsọ, na-eme ka ọ bụrụ naanị ihe dị ọcha ma dị mma. ka ndi mmadu kwadoro ya.
Ma eleghị anya i nwere ike ịmata echiche ahụ. Nanị ihe m na-ekwu bụ na ọ dị mfe ikwu karịa eme. N'ezie. Ma, ma o sina dị, gịnị ka anyị nwere ike ime gbasara ntanetị weebụ gị SEO, ọ dịkarịa ala ka ịmalite ịgagharị na egwu ahụ? Ka anyị buru ụzọ hụ n 'ebe anyị nwere ike isi melite weebụ gị na SEO. Oge a ka anyị ga-amalite na ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na-ahụ na saịtị.
Chee echiche banyere ọdịnaya gị dị ka a ga - asị na ị na - agwa ndị mmadụ okwu mgbe ị na - eburu n'obi na ibe weebụ nwere ike ịchọta ma ndị ezigbo ọrụ, na engines ọchụchọ site na isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu dị mkpirikpi. N'ụzọ dị otú a, ide ihe dị n'ime ya ga-esi ike karịa nke ọ nwere ike iyi na mbụ. Ọ ga-achọ ọtụtụ ume iji duzie nyocha ọchụchọ ziri ezi, mepụta edemede dị iche iche nke nwere mkpirikpi nke okwu okwu dị mkpa, ka na-achọ ihe dị mma ma dị mma iji gụọ, ma na-enye nnukwu uru ọmụma n'otu oge ahụ. Chee echiche banyere ya. Eleghi anya ị ga-eji ọkachamara ọdịnaya maka enyemaka ụfọdụ. Nke ahụ ga-abụ mkpebi siri ike.
Njikọ na Social Media
Ụlọ njikọ nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa na ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ nkwado SEO.N'ezie, ọ na - arụ ọrụ nke ọma - Google na - achọ njikọ niile, ma ịkọwa gị peeji nke ma na - eduga na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ma isiokwu nke ezigbo njikọ na mmekọrịta ahụike na Social Media bụ ka a na-apụghị ịdaghasị. Ma ọnụ ọgụgụ ha na àgwà ha. Ma ọ bụ ihe ọ bụla na ya? Kwesịrị ka njikọ gị niile bụrụ ihe ndị dị ndụ? Gịnị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ụfọdụ ederede ma ọ bụ tinye maka njikọ ụgwọ na nnukwu? Ihe ọ bụla ị ga-ekpebi na nke ahụ, mana m kwenyere na iji ha eme ihe ma ọ bụ na-ejikọta ha ga-ejedebe ọnọdụ dị ala na SERPs, n'ihi ya, anyị na-eme mgbalị niile anyị na-eme na SEO nkwado ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe Source .